Ny UNWTO dia maneho ny fahatokisany ny fizahantany eto Madagascar
Home » Travel Associations News » Ny UNWTO dia maneho ny fahatokisany ny fizahantany eto Madagascar
Novambra 4, 2017
Ny sekretera jeneralin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO), Taleb Rifai, dia nitsidika an'i Madagasikara haneho ny fanohanany feno ny fikambanana amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny fizahantany eto Madagasikara dia miatrika toe-javatra sarotra aorian'ny fihanaky ny valanaretina pesta izay nahatonga ny firenena sasany hametra ny fameperana ny dia miaraka amin'i Madagascar. Notsiahivin'Andriamatoa Rifai fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanoro hevitra ny tsy fameperana ny fivezivezena na ny varotra eto Madagasikara.
“Ny UNWTO dia mamelombelona ny torohevitra omen'ny OMS amin'ireo governemanta mba tsy hirotoroto hamoaka mpanolotsaina momba ny dia tsy marina. Ny fanavaozam-baovao nataon'ny WHO Key Messages tamin'ny 26 Oktobra dia nahatadidy fa toa tsy azo inoana ny loza ateraky ny fielezana iraisam-pirenena. Ny WHO dia tsy manoro hevitra ny hameperana ny fivezivezena na ny varotra eto Madagasikara mifototra amin'ny fampahalalana misy ankehitriny », hoy Andriamatoa Rifai.
"Tsy azontsika atao ny manasazy firenena indroa - indray mandeha rehefa voadona ny firenena ary mila miatrika sy mandoa ny vidiny mivantana amin'ny krizy mandringana ary faharoa avy aminay, vondrom-piarahamonin'olombelona, ​​latsaka amin'ny fiheverana diso lalana ary, vokatr'izany, ny fanilihana sy ny fitokanana ny firenena iharan'izany ary manampy ny olana fa tsy ny vahaolana ", hoy ihany izy.
Tsiahivin'ny WHO fa zava-dehibe ny fanaovana fifandanjana eo amin'ireo firenena mamporisika any amin'ny faritra mba ho vonona hihetsika raha sendra valanaretina, nefa misoroka ny tabataba izay mety hiteraka fepetra tsy ilaina na tsy famokarana toy ny fameperana ny varotra na ny fandraràna ny fivezivezena amin'ireo firenena voakasik'izany.
“Miatrika krizy fahitana izahay. Ny fifandraisana mazava sy marina amin'ny zava-misy marina eto Madagasikara dia zava-dehibe mba tsy hanakanana ireo mpanolotsaina manimba ny fanamafisana ny krizy, "hoy i Rifai.
Nihaona tamin'ny minisitry ny fizahantany, mpikambana ao amin'ny governemanta, ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny solontena avy amin'ny Firenena Mikambana eto Madagascar, anisan'izany ny mpandrindra ny Resident WHO, ny Banky Iraisam-pirenena, ny sehatra tsy miankina ary ny haino aman-jery, Atoa Rifai dia nahatsiaro fa mivoaka amin'ny sehatra toa ny fiaraha-miasa stratejika vaovao eo amin'ny Air Madagascar sy Air Austral. Mila mampita ny vaovao tsara isika; atsangano ny fahaizantsika ary avereno ny fahatokisan-tena. ”
Notsiahivin'ny minisitry ny fizahan-tany Roland Ratsiraka fa "nosy manana biodiversité 80% voajanahary i Madagasikara dia manana antso voajanahary ho an'ny fizahan-tany maharitra" hoy ny minisitry ny fizahantany. "Mr. Sekretera jeneraly, manan-danja amin'ny dikany ny fitsidihanao, manome fanantenana ny vahoaka iray manontolo sy ireo izay mbola misalasala ny amin'ny tombotsoan'ny harinkarenan'ny indostrian'ny fizahantany ”, hoy ihany izy.
"Ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rehetra amin'ny toe-java-misy krizy dia manahirana ary miantso ny firenena rehetra ao amin'ny faritra izahay mba hiara-hiasa amin'ny fomba hanamafisana ny fisorohana nefa tsy hamorona fandrarana tsy ilaina amin'ny dia," hoy ny Najib Balala, Filohan'ny Vaomieran'ny UNWTO ho an'ny Africa sy ny minisitry ny fizahantany an'i Kenya.
Hihaona amin'ny mpanao gazety ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO sy ny minisitry ny fizahantany eto Madagasikara amin'ny herinandro ho avy izao ao amin'ny World Travel Market any London hiresaka ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny.
Ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika dia hamaly ny Vovonana iraisam-pirenena momba ny fitantanana krizy momba ny dia
UNWTO dia nanambara ny fampahalalana an-gazety momba ny fiantraikan'ny valanaretina pesta eto Madagasikara amin'ny fizahan-tany
16 minitra lasa izay